မျက်စိဖြင့်ကြည့်ရုံနဲ့ Virus ရှိတယ်ဆိုတာသ&#414 - MYSTERY ZILLION
မျက်စိဖြင့်ကြည့်ရုံနဲ့ Virus ရှိတယ်ဆိုတာသ&#414
January 2009 edited October 2009 in Antivirus & Virus
ကျွန်တော်စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်လေးကိုပြောပြမယ်ဗျာ။ သိပြီးသားသူများရှိလျှင်လဲ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာက သင့် Memory Stick (သို့) Hard Disk ထဲကို Virus ဝင်သွားလား နဂိုအတိုင်းပဲလားဆိုတာကို မျက်စိဖြင့်ကြည့်ရုံနဲ့ သိအောင်လုပ်နည်းလေးပါ။
အရင်ဦးဆုံး သင့် Memory Stick (သို့) Hard Disk ထဲကို .ico ဆိုတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံ သင်ပေါ်ချင်တဲ့ပုံပေါ့ တစ်ခုခုထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် notepad တစ်ခုခေါ်ပြီး notepad ထဲမှာ
ဆိုတာရိုက်ထည့်ပြီး Autorun.inf အနေနဲ့ save မှတ်လိုက်ပါ။
ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် ကျွန်တော်ပေါ်ချင်တဲ့ icon နာမည်က NME.ico ဆိုတဲ့ ပုံလေးကို Memory Stick ထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင်စောစောကပေးထားတဲ့ကုုဒ်မှာ ဒီလိုရိုက်ပါမယ်။
ဆိုပြီးတော့ Autorun.inf ဆိုပြီး save မှတ်လိုက်ပါပြီ အဲဒါဆိုရင်ရပါပြီဗျ။
အပေါ်ကအနီပြထားတဲ့ပုံလေးလိုပေါ်နေရင် Virus မရှိဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်ပြောသလိုပုံထည့်ထားရဲ့သားနဲ့ My Computer ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အဲလို Icon မပေါ်တော့ရင် Virus ဝင်နေတာသေချာပြီပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်အသင့်လုပ်ထားတဲ့ ဖိုလ်ဒါလေးကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့
အဲဒီကနေဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး သင့် Memory Stick (သို့) Hard Disk ကို Extract လုပ်ပြီး restart ချလိုက်ရင်(Memory Stick ဆိုရင် ဖြုတ်ပြီးပြန်တတ်ရင်ရ) အပေါ်က နမူနာပြထားတဲ့ပုံထဲကလို Icon နဲ့ပေါ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
thankalot for your sharing knowledge .:):)
January 2009 edited January 2009 Administrators
ကျေးဇူးပါ ညလေးရေ .....
အသုံးလဲ၀င်ပါတယ် ... နားလဲလည်ပါတယ် ... အရေးအသားလဲ ကောင်းပါတယ်ဗျာ ....
Memory Stick Icon ကို စိတ်ကြိုက်ပုံဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပါ ... သိသွားကြမှာပါ .....
ကျေးဇူးပါကိုချောင်မီးအိမ်ရေ။ နောက်တခါနာမည်ပြောင်းရင် ကျွန်တော့်ဆီ Pm ပို့ထားဦးနော်။
Thank you very much Ko Nya! Your contribution is highly appreciated.
January 2009 edited January 2009 Registered Users, Moderators
ကျွန်တော်သေချာပြန် စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ ဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးကိုတော့မသိနိုင်ဘူးဗျ။ ဥပမာ spyware ဝင်နေတယ်ဆိုရင်မသိနိုင်တော့ဘူး။ ကဲဒါတွေထားပါ အခုကျွန်တော်က ပုံလှလှလေးပြောင်းချင်သူများအတွက်ပုံပေးမလို့ပါ။
ဒီထဲမှာ ပုံလှလှလေးတွေအများကြီးပါ။ ရဲရဲကြီးသားဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးကြည့်ကြည့်ပါ။ ပုံလေးတွေကတကယ်လှပါတယ်။ သဘောကျမှာ ကျိန်းသေပါတယ်။ ဒါပေမယ် icon တွေမဟုတ်ဘူးဗျ။ jpg ဖို်င်တွေ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Admin ကြီး စေတန်ရေးသားထားတဲ့ ပုံတွေကို icon ပြောင်းတဲ့ software လေးရှိပါတယ်။ အောက်ကလင့်ခ်လေးက စေတန်ရေးသားထားတဲ့ software လေးပါ။
မျက်စိဖြင့် ကြည့်ရုံဖြင့် မသိနိုင်ဘူးဆိုလို့ ပုတ်သင်ညို ကြော်ငြာများလား ဆိုပြီး ဝင်ကြည့်တာ။ :d
ွွှှThanksalots !! It is very useful and easy.
Thanksalots..... ကျေးဇူးပါ အကိုရေ။ အခုလိုပြောပြတဲ့အတွက် ......:D
ကိုညမီးအိမ်ရေ... ကျွှန်တော့် stick ထဲမှာ notepad ဖွင့်ပြီးအကိုပေးတဲ့ code ကိုရိုက်ပါတယ်...ကျွှန်တော့်နာမည် .ico ထားပါတယ်...ပြီးတော့ အကိုပြောတဲ့အတိုင်း Autorun.inf နဲ့ save တာမရပါ... text နဲ့save လုပ်မလားပဲမေးနေတယ်ဗျ... Autorun.inf file ဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဗျ....
sharp.klo wrote: »
Flash drive ထဲမှာ autorun file တစ်ခုရှိနေလို့ဖြစ်မယ် .. ဗိုင်းရပ်ကြောင့် ရောက်နေတာလဲဖြစ်နိုင်သလို Flash Drive Utlities တွေထည့်ထားလို့လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. အဲဒီ ရှိပီးသာ autorun ဖိုက်ကိုဖျက်ချင်ရင်တော့
attrib -s -h -r *.inf
အဲ့ဒီ code လေးတွေ ကို copy ကူး Notepad ထဲမှ paste လုပ် . code.bat ဆိုပီး Flash ထဲမှာ save .
ပင်နယံဘီး ပုံပါတဲ့ဖိုင်လေးရလာမယ်.. အဲ့ဖိုင်ကို double click လုပ်ပီး run လိုက်
ပီးမှ ကိုယ့်ရဲ့ autorun ဖိုင်ကိုပြန် save ကြည့်ပါ ..
မရဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ Drive နဲ့ စက်ထဲမှာ virus ရှိနေလို့သော်လည်းကောင်း၊ Flash Drive ထဲမှာ Utlities တွေ ရှိနေလို့သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပါတယ်
ဒါမှမဟုတ် Tools - Folder Option - View - Hide Extension of known file types ကို Uncheck လုပ်ပြီးမှ အစ်ကို့ Autorun File ကို .inf အနေနဲ့ Save လုပ်ကြည့်လိုက်ပါလား . အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ် .
ကျနော် မေးချင်တာလေးတစ်ခုရှိလို့ပါ။ ပုံမှန် Window icon လေးတွေကို Views ကို Tiles လုပ်ပြီး single click လုပ်ကြည့်ရင် shadow လေးက သူ့ Icon ပုံလေးအတိုင်းပဲ ကျပြီး အခုကျနော်တို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံကျတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ original Image ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ shadow ကပေါ်နေတယ်ဗျ။ အဲ့ဒါ Icon လေးပဲ shadow ကျစေချင်တယ်ဆို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ သိတဲ့သူတွေဖြေပေးကြပါ။
ကျနော့ ဟာလေးဘယ်သူဖြေပေးမလဲလို့ လာလာကြည့်တာ ၂ ရက်တောင် ရှိပြီဗျာ...
တကယ်ပဲမသိကြလို့လား။ စိတ်မဝင်စားကြလို့လား။ လားပေါင်းများစွာဖြင့် ဖြေပေးမယ့်သူကို မျှော်နေဆဲ.... :2: :2: :2:
March 2009 edited March 2009 Registered Users, Moderators
ကို phoenix ရေ အစ်ကိုပိုစ်ကို ကျွန်တော်အစကတည်းကမြင်ပါတယ်ဗျာ စိတ်မဝင်စားလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လဲမသိလို့မဖြေတာပါ...သည်းခံပြီးစောင့်လိုက်ပါဦး...သိတဲ့လူများလာဖြေပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ထင်တာတစ်ခုပြောကြည့်မယ်နော်။ ကျွန်တော်တို့ပုံတွေက အဖြူရောင်နောက်ခံမှာဆွဲထားတဲ့ပုံတွေမို့လို့အဲလိုပေါ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အစ်ကိုပြောသလိုပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် photoshop နဲ့ နောက်ခံအဖြူတွေကိုလိုက်ဖျက်ပြီး ပုံပဲကျန်ခဲ့အောင်ပြင်ပြီးစမ်းကြည့်ပေါ့။ ထင်တာပြောခဲ့တာပါ။ သိတဲ့လူများလာဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်ကိုညမီးအိမ်ပြောသလို စမ်းလုပ်ကြည့်ပြီးပြီဗျ။ ကို စေတန်ရဲ့ icon ပြောင်းတဲ့ software ထဲမှာတင် ပြင်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ icon လေးပဲပေါ်တယ်။ strick ထဲထည့်ပြီး သုံးတဲ့အခါကျတော့ အရင်အတိုင်း image တစ်ခုလုံးပေါ်နေပြန်ရောဗျ။ ကျနော်လဲ သိပ်နားမလည်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ မရလဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကျေးဇူးပဲဗျာ ပြန်ဖြေပေးတာ။
NCIS dvd boxset season1-5
Star Trek season1-7DVD Boxset
နားမလည်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်အရေးအသားညံ့လို့ပါ။ :d
ကျွတော် လည်းရဘူးဗျ အကိုရ.တချို့antivirus တွေက autorun ဆိုကစ်တယ်။ အကိုကိုတော့ ကျေးဇူးပါဗျာ။နောက်လည်းရှာ၊ပြီးရေးပေးဦးနော်
ညီတို့လဲ သိတာရှိ ဖွပါ့မယ်ဗျာ။နော့်
ကျေးဇူး ပါ ဗျာ... အရမ်းအဆင်ပြေသွားပါတယ် ... :6::5::5:
ကျေးဇူးပဲဗျို့ ။ အနော်ကဗိုင်းရပ်ဆိုရင်လေသိလား လာထားလို့မပြောပါဘူး ။ တားတားကြောက်ကြောက် ။ ပြောပြပေးတာကျေးဇူးပါဗျာ ။
thz alot bro..............